ShweMinThar: ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာနှင့် သုံးရမယ့် ပတ်တီး၊ ပလာစတာများ
ဆေးဆိုင်ကြီးတွေမှာ ပြတ်ရှဒဏ်ရာတွေကို ဆေးထည့်အုပ်ပေးရန် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ ဆေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ဒါဇင်ပေါင်း များစွာကို ထုပ်ပိုးထားလေ့ရှိပါတယ်။ ပွန်းပဲဒဏ်ရာတစ်ခုခုရရှိပါက ဘယ်လိုဆေးပစ္စည်းမျိုးဖြင့် အနာကိုထည့်ပေးရ မလဲဆိုတာ သိရှိအောင် တောင်ပိုင်းဖလော်ရီဒါယူနီဗာ စီတီမှ အရေပြားဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ကုဌာနမှ ဒေါက်တာ ဗေစယ် အက်စ်ချာဖီးလစ်စ်က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားပေးတာကိုဗဟုသုတရရန်အလို့ငှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပတ်တီးအောက်မှ ရေကိုအိုင်နေစေပါက အနာပတ်လည်ရှိအရေပြားထိခိုက်ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤပတ်တီးပလာ စတာများသည် မကြာခဏလက်ဆေးခြင်း၊ ပန်းကန်ဆေးခြင်း၊ အ၀တ်လျှော်ခြင်း များကို တောင့်ခံနိုင်တဲ့အတွက် လက် မှာအနာဖြစ်လျှင်သုံးပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
မီးလောင်ဖုလေးများမှ စိမ့်ထွက်သောအရည်ကြည်လေးတွေဟာ အနာကျက်ကြာစေပါတယ်။ ဤအနာကပ်ခွာလေး တွေမှာတော့ ဟိုက်ဒရိုကိုးလွိုက် hydrocolloids ခေါ် အရည်ကြည်ကိုစုပ်ယူပစ်နိုင်တဲ့ ဓာတု ပစ္စည်းများပါဝင်ပါတယ်။ ၄င်းဟိုက်ဒရိုကိုးလွိုက်များက အနာကျက်စေရန် အရည်ကြည်များကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ဂျယ်လ်အဖြစ် သုံးပေးနိုင် ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ မိမိအရေပြားနဲ့ဓာတ်မတည့်ပါက ပတ်တီး၊ ပလာစတာတွေဟာ သင့်အရေပြားကို ယားယံစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဓာတ်မတည့်မှုနည်းပါးတဲ့ ကပ်ခွာလေးတွေကို သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းမှာ hypoallergic adhesive လို့ရေး ထားလေ့ရှိပါတယ်။
သွေးမထွက်တဲ့ ကုတ်ရာခြစ်ရာ ဒဏ်ရာလေးတွေမှာသာ သုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးထွက်များရင်တော့ သွေးတိတ် အောင် ရိုးရိုးပတ်တီးစဖြင့် စည်းပေးတာကတော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
(၅) ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ ပတ်တီးပလာစတာ
ခဏခဏဆောင့်မိတိုက်မိနိုင်တဲ့ အနာတစ်ခုဖြစ်ရင်တော့ အနာကျက်တာဟာ နှေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဤပတ်တီးမျိုးဟာ အ၀တ်ထူထူထဲထဲလေးဖြင့် ပြုလုပ်ထားမှသာလျှင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများကို ကူရှင် သဖွယ် ခံထားပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
(၆) ပဋိဇီဝဆေးပါတဲ့ ပတ်တီးပလာစတာ
ပဋိဇီဝပိုးသတ်လိမ်းဆေးပါတဲ့ ပလာစတာကို ပိုးဝင်ရောက်ခံရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ အနာများ ဥပမာ – အမြင့်က လိမ့်ကျလို့ ကုတ်ခြစ်ရာများ သို့မဟုတ် ပွန်းပဲ့ရာကြီးကြီးတွေဆိုရင် ဤပလာ စတာမျိုးသုံးသင့်ပါတယ်။
(၇) အကွေးအဆန့်နေရာများမှာ သုံးရမယ့်ပလာစတာများ
တံတောင်ဆစ်၊ဒူးဆစ်၊လက်ကောက်ဝတ်၊ခြေမျက်စိစတဲ့ အကွေးအဆန့်များတဲ့နေရာမှာ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိပါက ကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ပလာစတာမျိုးသုံးသင့်တယ်။ လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း သူတို့က လိုက်လှုပ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အမှတ်စဉ် အလိုက်ပုံများကိုသတိထားပြီး ကြည့်ထားပါ။
Ref: Health Digest Journal Vol. (6), No. (38) – July 1 2009